Tag: famaritana terminolojia | Martech Zone
Tag: famolavolana terminolojia
Nihomehy kely aho rehefa hitako ity sary ity satria, raha ny fandehany, tsy maintsy ho mpamorona endrika sary aho. Saingy, indrisy, mahavariana ny mahita ny zavatra tsy fantatro momba ny indostria izay natsofoka lalina tato anatin'ny 25 taona. Ho fiarovako dia tsy miloka fotsiny aho ary mangataka sary. Soa ihany, ireo mpamoron-tsainay dia mahafantatra bebe kokoa momba ny famolavolana sary noho izaho. Tokony ho fantatrao ny mahasamihafa azy